Taageerada Xisbiga S oo Kor u Kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taageerada Xisbiga S oo Kor u Kacday
La daabacay måndag 16 april 2012 kl 10.51
Tirakoobkii ugu dambeeyay ee ay sameeysay shirkadda Sifo ayaa lagu cadeeyay inay kor u kacday 3,1% taageerada xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu gaartayna 36,8%. Laga soo bilaabo bishii jannaayo ee sannadka ayay taageerada xisbigu kor u kacday 12,2%.
Taageerada farqiga u dhaxeeya xisbiyada ku bahoobay awooda dalka (is-ku-tagga) iyo xisbiyada mucaaradka ee casaan cagaarka ayaa gaarsiisan 8,9%, middaasina oo ey xisbiyada casaan-cagaarku guusha ku sitaan.
Marka laga yimaado kor u kaca taageerada xisbiga S ayaa haddana aannu farqigaasi si aad ah kor ugu kicin, iyadoona uu xisbiga Dooggu (Mp) lumiyay taageero gaarsiisan 1%. Xisbiga Kristendimoqoraadiga (Kd) ayaa kor u kacay 0,5%, gaarsiisanna iminka xadka tiradii looga baahnaa si xubno loogu yeesho baarlamanka.
Ilaha: SvD iyo Göteborgs-Posten.